Talyaaniga oo Koobka Aduunka laga reebay inuu u soo baxaa iyo ciyaartooydii weyneed oo ka fariistay.
Friday, October 19th, 2018 - 14:53:58
Tuesday November 14, 2017 - 08:54:38 in Wararka by Ak Caqil
Kadib markii ay Talyaaniga ka hareen inay u soo baxaan Koobka Aduunka ee lagu qaban doono Russia sanadka dambe xalay Talyaaniga ayaa waxaa ka fariistay Qaranka dhoor laacib.
Dalka Sweden ayaa isku celcelis ahaan reebay Talyaaniga kadib markii ay 1-0 kaga adkaadeen lugtii hore oo ka dhacday magaalada Stockholm Jimcihii. Talyaaniga ayaana ku guuldareestay inuu 180 daqiiqo ka dhaliyaa Dalkaan Sweden wax gool ah.
Hogaamiyaha Talyaaniga Gigi Buffon ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka fariistay Xulka Talyaaniga waxaana sidoo kale ka wada fariistay xiddigaha Chiellini, Brazagli iyo De Rossi. Goolhaaye Gigi Buffon oo 39 sano jir ah ayay aheed isku daygiisii ugu dambeeye ee uu Talyaaniga ku matali lahaa Koobka Aduunyada. Buffon ayaa Talyaaniga markiisii ugu horeeysay u saftay 1997-kii xilligaas oo ay Talyaaniga la ciyaareen Russia kulan sidaan oo kale loogu soo baxaaye Koobkii Aduunka ee lagu qabanaaye France 1998-dii balse dhaawaca Gianluigi Pagluica ee gaaray kulankii Moscow ka dhacay ayuu Gigi badal ku soo galay daqiiqadii 32-aad ee ciyaarta waxaana ay ku soo idlaatay 1-1 halkaas oo uu ka soobilooway waayahiisa Talyaaniga.
Buffon, De Rossi iyo Barzagli ayaa ku guuleestay Koobka Aduunka sanadkii 2006-dii markaas oo ay Rigooreyaal uga qaadeen France.
Macalinka Xulka Talyaaniga Gianpiero Ventura ayaa wax badan la eedeeye waxaana la sheegayaa in laga qaadi doono shaqada Talyaaniga oo markii ugu horeeysay muddo 60 sano ah aan Koo ka Aduunka ka qeyb qaadan doonin.